လေ့လာမှုအိပ်ဆုံးရှုံးမှုသငျသညျအဆီဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကရှင်းပြသည် - သတင်း Rule
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်သူတို့တစ်အထောက်အထားတွေ့ပြီအင်္ဂါနေ့ကပြောပါတယ် အိပ်စက်ခြင်း၏မရှိခြင်း အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေသည် ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု လူကိုခဲ hungrier feeling နှင့်ပိုပြီးဆူအောင်ကျွေးသောအစားအစာများကိုစွဲလမ်း.
သုတေသီတွေကရှည်လျားမတ်စောက်တဲ့အကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှုမှထောက်ပြကြပြီ အဝလွန်ခြင်းထ စက်မှုထွန်းကားသောလူမျိုးတို့နှင့်အိပ်ကြာချိန်အတွက်ကျဆင်းမှုအတွက်.
တစ်ဦးကကြောင်းကျိုးဆက်စပ် link ကိုသံသယရှိခဲ့, ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာအယန္တရားကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့သေးပါဘူး, အခုချိန်အထိ.
မှတစ်ဦးကအသင်း ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်က သူတို့အသုံးပြုတဲ့ကပြောပါတယ် MRI (သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်) အိပ်-ဆုံးရှုံးစမ်းသပ်ဘာသာရပ်များ၏ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုကိုပြောင်းလဲမှုများဆိုတာတွေ့ရဖို့ Scan ဖတ်စက်.
“ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မလုံလောက်သောအိပ်အဝလွန်ခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု / ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရသောအားဖြင့်တစ်ဦးရှင်းလင်းဦးနှောက်ယန္တရားပေး,” သူတို့ကဂျာနယ်အတွက် wrote သဘာဝတရားကဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး.
နှစ်ဆယ်သုံးသင်တန်းသားများကိုမိမိတို့ခေါင်းပေါ်နှစ်ကြိမ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေခဲ့; အိပ်နေတဲ့အပြည့်အဝညဥ့်ပြီးနောက်နှင့်တခါတညဉ့်အဘို့မိမိတို့ပိတ်-မျက်စိဆုံးရှုံးခံရပြီးနောက်တစ်ချိန်က — သူတို့၏ဓာတ်ပုံများကိုမှပစ္စည်းများနှင့်အဘို့ကိုအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်အဖြစ်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနောက်နေ့တိုင်းတာ 80 ကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာအမျိုးအစားများ.
အအတန်ငယ်မောတစ်ဦးချင်းစီများထဲတွင်, သုတေသီအစာစားချင်စိတ်များနှင့် satiation အကဲဖြတ်သော cortex ၏တိုင်းဒေသကြီးများတွင်ချို့ယွင်းလှုပ်ရှားမှုမှတ်ချက်ပြု. တစ်ပြိုင်နက်တည်း, တပ်မက်နဲ့ဆက်စပ်ဒေသများရှိတစ်ဦးထပ်တိုးရှိ၏.
“တစ်ဦးဒါ့အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာတွေ့ရှိချက်မြင့်မားကယ်လိုရီအစားအစာများကိုအအိပ်ဆုံးရှုံးသင်တန်းသားများကိုပိုပြီးနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်,” အမှာစိတ်ပညာဌာနမှလေ့လာမှုတွဲဖက်စာရေးဆရာမဿဲ Walker ကပြောပါတယ် ဘာကလေမှာရှိတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်က.
“ပိုပြီးဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများအသံချဲ့စက်အစုံလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအောင်ကောင်းသောတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ထိန်းချုပ်ဒေသများတွင်ချို့ယွင်းဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုဤတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူကောင်းစွာ fit, နှင့်အလားအလာရှင်းပြပါ, အိပ်အရှုံးအကြား link ကို, အလေးချိန်အမြတ်နှင့်အဝလွန်ခြင်း,” သူကပြောပါတယ် AFP သို့ အီးမေးလ်ဖြင့်.
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကညွှန်ပြ (သို့) မှန်မှန်အိပ်၏လုံလောက်သောပမာဏရရှိရန်အလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ်မြှင့်တင်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင့်လျော်သောအစားအစာရွေးချယ်မှုအုပ်ချုပ်ဦးနှောက်ယန္တရားများ priming အားဖြင့်အောင်မြင်။”
ထိုအဆိုအရ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့, ပို 1.4 ဘီလီယံခန့်အသက်ကြီးလူကြီးများ 20 နှင့်အထက်အတွက်အဝလွန်ခဲ့ကြ 2008 — နီးပါးကတည်းကနှစ်ဆခဲ့တဲ့ပုံ 1980.
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးတတိယထက် သာ. အဝလွန်ခဲ့ကြ 2008, နှင့် 11 ရာခိုင်နှုန်းကအဝလွန်, အနည်းဆုံး 2.8 သန်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးရလဒ်အဖြစ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသေဆုံး.
ဤဆောင်ပါး, လေ့လာမှုအိပ်ဆုံးရှုံးမှုသငျသညျအဆီဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကရှင်းပြသည်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2013 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
ပင်ပန်းထိုအဆာငတ်နေသော: ဦးနှောက်ကိုစကင် Point သို့အဘယ်ကြောင့်အိပ်ချိန်မလုံလောက်ခြင်း TRIGGER Junk စားနပ်ရိက္ခာစားရန်
19709	0 AFP သို့, electroencephalography, သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်, သဘာဝတရားကဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး, အဝလွန်ခြင်း, အိပ်စက်ခြင်းဟာဆင်းရဲချို့တဲ့, ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်က, ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ကဘာကလေ
← Marilyn Monroe '' တွေအတိုင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်မျှော်လင့်’ လင်းပိုင် '' အဆွေခင်ပွန်းသတိရ’ စီများမှုတ်’ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ →